Home News Madaxweynaha Puntland oo sheegay in Al-Shabaab ay adeegsanayaan gacmo kale
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa ku eedeeyay Dagaalamayaasha Al-shabaab isagoo sheegay inay adeegsanayaan gacmo kale oo doonaya in ay burburiyaan hanaanka dowladnimadda maamulka Puntland.
Inkastoo uusan Madaxweyne Deni uusan carabka ku dhufan gacmaha kale inay adeegsanayaan Alshabaab ayaa hase yeeshee waxaa uu xusay in saddex Gudoomiye gobol oo kala ahaa Banaadir, Nugaal iyo Mudug, isagoo xusay in ay qabaan tuhuno ku aadan in ay jiraan dad adeegsanaya Al-Shabaab.
Waxaa uu tusaale u soo qaatay Warar ay horay u qoreen qaar ka mid ah Warbaahinta Caalamka ee loolanka dalalka Carabta qaarkood ay ku jiraan Soomaaliya in ay qeyb ka noqon karto adeegsiga Al-Shabaab.
“Tuhun badan ayaa qabnaa oo ku aadan in Al-Shabaab ay noqdeen gacmo la iska adeegsado,gacmo kale iyo dano ayaa loo adeegsanaya sidda horay Jariidaha Caalamka u sheegeen in Muddo ka yar labo bilood la beegsado labo Gudoomiye gobol oo Puntland ah tuhun ayaan ka qabnaa baaritaanana waan wadnaa” ayuu yiri Madaxweyne Deni.
Madaxweynaha Maamulka Puntland Saciid Cabdullahi Deni ayaa sheegay in dowladda federaalka ay wado qorshe lagu duminayo mamaulka Puntland.
Waxa uu sheegay in dowlada federaalka ay bilowday in madaxda maamulkaas aysan la laheyn wax xariir ah, taas bedelkeedna ay bilowday inay xiriiro iyo kala qoqob ka dhex bilaawdo maamulka PuntlanMadaxweynaha Puntland
Sidoo kale Madaxweyne Deni ayaa shaki geliyay in hoobiyaasha lagu rido xarunta ciidamada AMISOM ee Xalane ay ka dambeeyaan ururka Alshabaab,isagoo sheegay in marka mowqif adag ay beesha caalamka ka istaagaan arrimaha Soomaaliya hoobiyaasha lagu rido xarunta Xalane.
Muddo ka yar 2 bilood ayaa Qaraxyo ismiidaamin ah lagu dilay Gudoomiyeyaasha gobolada Mudug iyo Nugaal, waxaana Mas’uuliyada dilka sheegtay Al-Shabaab.